नागढुंगामा चिकित्सकको गाडी खानतलासी गर्दै डाक्टरको मानमर्दन, कारबाहीको माग::Nepal's Digital Newspaper
नागढुंगामा चिकित्सकको गाडी खानतलासी गर्दै डाक्टरको मानमर्दन, कारबाहीको माग
नागढुंगामा त्यस्ता केही अवाञ्छित गतिविधि भएको सूचना आएको र दोषी देखिए कानुनी कारबाही हुने गृह प्रवक्ता शर्माको भनाई
आइत, जेष्ठ ४, २०७७
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो शुक्रबारदेखि निकै भाइरल भइरहेको छ । भिडियोमा केही युवाले सडकमा गुडिरहेको एक गाडीलाई रोकेर सोधपुछ गरिरहेका छन् । गाडीमा एक पुरुष र एक महिला स्वाथ्यकर्मी यात्रा गरिरहेको बेलामा युवाहरुले कडा शब्दमा तपाईको झोला देखाउनुहोस् । मास्क किन नलगाएको भन्दै ? केरकार गरेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने अधिकार ती युवाहरुलाई कसले दिएको र तीनलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने आवाज अहिले सामाजिक सन्जालमा उठ्न थालेका छन् ।
के थियोे घटना
कतिपयले स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने सञ्चारकर्मी रहेको अनुमान गरी सामाजिक सञ्चालमा सञ्चारकर्मी्विरुद्ध आक्रोश पनि पोखिरहेका छन्। यथार्थमा उनीहरु कुनै पत्रकार वा सुरक्षाकर्मी केही नभएको देखिएको छ। आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भनेर चिनाउने उत्तम कार्कीसहित केही युवाले उहाँको गाडीलाई रोकेर अनुसन्धानमा खटिएको सुरक्षाकर्मीले जस्तै केरकार गरेको थियो। त्यो दृश्यलाइ आफूलाई सामाजिक अभियान्ता भनेर चिनाउने उत्तम कार्की नामका युवाको फेसबुकबाट लाइभ गरिएको थियो। युवाको समूहले स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्दा पनि प्रहरीले रोकेन। अवरोधपछि कार्की हेटौँडा नै फर्किनुभयो। उहाँ शनिबार साँझ मात्रै काठमाडौं आउनुभएको छ।
युवा : तपाईंहरूको गाडीमा ल्याएको ब्यागभित्रको सामग्री छ नि, त्यो देखाउनुुस् । त्यो सामान ठ्याक्कै देखाउनुस् है । तपाईं नियमसंगत तवरले आउनुभएको रहेछ । तपाईं पनि एउटा स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुँदो रहेछ हैन । तपाईंहरूले जे गर्नुभएको छ त्यो हाम्रै लागि गरेको भन्ने हामीले बुझेका छौँ । अब हामी पनि काम गर्छौं । त्यो तपाईंहरूका लागि हो भन्ने सोच्नुर्पयो भनेर बुझ्नुस् है त । ओके ब्याग चेक गरौँ है त  । अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । हामीले यो गरेको तपाईंहरूकै लागि हो । नागरिकको हैसियतले सामग्री चेक गर्दैै छौँ है ।
यसैबिच डा. नारायण कार्कीले ह्यारेसमेन्टबाट दिक्क भएको र यो बारेमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएको बताउनुभएको छ । सडकमा केरकार गर्ने माथी के कारवाही हुन्छ आफु प्रतिक्षामा रहेको उहाँको भनाई छ ।
यस्तै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले खानतलास गर्न, सोधपुछ गर्न प्रहरीबाहेक कसैलाई पनि अधिकार नभएकोभन्दै कोही व्यक्ति त्यस्ता गतिविधिमा उत्रिए त्यो गैरकानुनी हुने बताउनुभएको छ । नागढुंगामा त्यस्ता केही अवाञ्छित गतिविधि भएको सूचना आएको र दोषी देखिए कानुनी कारबाही हुने उहाँको भनाई छ ।